विद्युतीय गाडी आयातकर्तासँग कर बढ्ने पूर्वसूचना थियो ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/विद्युतीय गाडी आयातकर्तासँग कर बढ्ने पूर्वसूचना थियो ?
२१ जेठ, काठमाडौं । गत जेठ १५ मा आएको बजेटमार्फत सरकारले नेपाल आईरहेका प्रकृतिका धेरैजसो विद्युतीय सवारीमा भन्सारसहितका कर २९प्रतिशतबाट बढाएर १४९ प्रतिशतसम्म पुर्‍यायो । बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि मात्र भन्सार विन्दुमा रोकिएका सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारीहरु भटाभटी जाँचपास गरेर छुटेका थिए । जसका कारण ५० करोडभन्दा बढी सम्भावित राजस्व गुमेको आकलन गरिएको छ । अहिले प्रश्न उठेको छ, के यो संयोग मात्र हो ?
लकडाउनकै बीच बस्यो राष्ट्रियसभा बैठक, बागलुङ कोरोनाको इपिसेन्टर बन्ने खतरा !